काठमाडौ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको नियुक्तिमाथि नेपाल चलचित्र नृत्य संघले विरोध जनाएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानले चार वर्षको अन्तरालमा गर्ने नियुक्तिमा सम्बन्धित कुनै
अमेरिका : तेस्रो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड २०१८ सम्पन्न भएको छ । अमेरिकाको कोलोराडोस्थित डेनबर शहरमा शनिबार राती भव्य समारोहबीच सम्पन्न सो अवार्ड समारोहमा यसपटक सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड फिल्म भुईमान्छेबाट
‘जीवन काँडा की फूल’ चैत्र २२ बाट प्रदर्शनिमा, बरिष्ठ साहित्यकार झमक कुमारीले गरिन यस्तो आग्रह…
धनकुटा खबर । बरिष्ठ साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेको जीवनीमा आधारित मदन पुरस्कार बिजेता कृति ‘जीवन काँडा की फूल’ मा बनेको फिल्म प्रदर्शनीमा आउने भएको छ । निर्माता कम्पनी बिष्ट ब्रदर्शले
सुनसरी । मिस पुर्वाञ्चल २०१८ को उपाधि झापाकी पुजा श्रेष्ठले जित्न सफल भएकी छिन । सुनसरीको धरानमा शनिबार राति सम्पन्न उनले ताजसँगै यामाहाको स्कुटी, हङ्गकङ्ग भ्रमण र विभिन्न उपहार समेत
गरिबको घरमा बल्यो खुशीको दीयो, नेपाल आइडल सिजन-२’का विजेता बने रवि ओड, के–के पुरस्कार पाए ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन २ को उपाधि कञ्चनपुरका रवि ओडले जितेका छन् । शुक्रबार नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकको ग्राउन्डमा भएको ‘ग्रान्ड फिनाले’ मा बिक्रम बराल, सुमित पाठक र अस्मिता
नेपाल आइडल-२ को ग्रान्ड फिनाले शुरु, को हुनेछ नेपाल आइडलको बिजेता ? – हेर्नुहोस् लाइभ भिडियो
काठमाडौँ । एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारित लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज गायन रियालिटी शो नेपाल आइडलको दोस्रो संस्करणको ग्रान्ड फिनाले आज शुक्रवार हुँदैछ । फिनाले ललितपुरस्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकमा हुनेछ। देशका विभिन्न सहरमा
युवतीलाई माया जालमा फसाऊन यी युवकले यति सम्म गरे – हेर्नुहोस् असफल प्रयास
काठमाडौं । युवा जगतलाई मनोरञ्जन दिने उदेश्यले ‘असफल प्रयास’ अर्थात ‘अनसक्सेसफूल एटेम्प्ट’ नामक कमेडी एक्ट भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ । यौवनावस्थालाई मध्येनजर राख्दै आफूलाई मन परेको मान्छेलाई रिझाऊन कतिहद सम्म
चलचित्र ‘प्रेमलीला’को अर्को गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ । चलचित्र ‘प्रेमलीला’को दोश्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । अन्तर्देशीय प्रेम सम्बन्धको कथा प्रस्तुत गरिएको फिल्मको ‘मिस गरेँ’ सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा नायिका दिपशिखा खड्का र
साहित्यकार झमक घिमिरेको कृतिमा आधारित फिल्म ‘जीवन काँडा कि फूल’ निर्माण सम्पनन ! चैत २२ गते देशभर प्रदर्शन
काठमाडौँ–साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेको ‘जीवन काँडा कि फूल’ कृतिमा आधारित चलचित्र निर्माण भएको छ । करीब दुई घण्टा समयावधिको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन धनकुटास्थित घिमिरेको निवासस्थल तथा धरान र ललितपुरमा गरिएको छ
झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘जीवन काडा कि फूल’ चैत २२ देखि देशभरका सिनेमाघरमा !
काठमाडौं । मदन पुरस्कार बिजेता साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित ‘जीवन काडा कि फूल’ नामक आत्मकथात्मक कृतिमा आधारित भएर निर्माण भएको नेपाली कथानक चलचित्र अगामी चैत २२ देखि देशभरका सिनेमाघरमा